ရှေးခတျေကမ်ဘာ့အံဖှယျ ၇ ခုရဲ့ မူလပုံစံ - Thutazone
Thutazone August 20, 2020 1 min read
ရှေးခတျေ ကမ်ဘာ့အံ့ဖှယျ ၇ ခုအကွောငျးကိုတော့ အနညျးနဲ့ အမြား အားလုံးသိဖူးကွားဖူးပွီးဖွဈကွမှာပါ။ နှဈထောငျပေါငျးမြားစှာ လူသားမြားသမိုငျးအတှငျးမှ လူတို့တညျဆောကျခဲ့ကွသော အရာမြား နှငျ့ သဘာဝအတိုငျးအံ့မခနျးတညျရှိနသော အရာမြားကို စုစညျးပွီး ကမ်ဘာ့အံဖှယျမြားအဖွဈ စာရငျးပွုစုခဲ့ကွခွငျးဖွဈပါတယျ။
ရှေးခတျေကမ်ဘာ့အံ့ဖှယျတှကေို ဂရိခရီးသှား သမိုငျးပညာရှငျတှဟော ဘီစီ ၁ရာစု ကာလကတညျးက ပွုစုခဲ့ကွပမေယျ့ ဒီ ၇ ခုကို အမြားစုလကျခံလာကွတာကတော့ ဉာဏျသဈအရေးတျောပုံခတျေ အဒေီ ၁၅ရာစု ကာလလောကျမှ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအံ့ဖှယျ ၇ ခုကတော့ (၁) ဂိုငျဇာမဟာပိရမဈကွီး ၊ (၂) ဘဘေီလုံရှိ မိုးပြံဥယြာဉျ၊(၃) အိုလမျပီယာရှိ ဇုဈနတျမငျးကွီး၏ ရုပျတု ၊ (၄) အာတီးမဈ ဘုရားကြောငျး၊ (၅) ဟလေီကာနပျဆပျရှိ မျောဆိုလော့ဈ၏ ဂူသင်ျခြိုငျး၊ (၆) ကိုလော့ဆပျရှိ ရုတျဒျရုပျတု နဲ့ (၇) အလကျဇန်ဒွီးယားမီးပွတိုကျ တို့ဖွဈပါတယျ။
ဒီအဆောကျအအုံ နဲ့ ရုပျတုတှထေဲမှာ အစောဆုံးကတော့ ဘီစီ ၂၆ရာစုကာလမှာ တညျဆောကျခဲ့တဲ့ ဂိုငျဇာပိရမဈကွီးဖွဈပွီး နောကျအကဆြုံးကတော့ ဘီစီ ၂၈၀ ခနျ့မှာ တညျဆောကျခဲ့တဲ့ အလကျဇန်ဒွီးယားမီးပွတိုကျ ပဲ ဖွဈပါတယျ။ လှနျခဲ့သောနှဈပေါငျး ၂၀၀၀ နဲ့ ၅၀၀၀ ကွားမှာ တညျဆောကျခဲ့တာလို့ ဆိုရပါမယျ။ ယနအေ့ခြိနျမှာတော့ ဒီရှေးခတျေ ကမ်ဘာ့အံ့ဖှယျ ၇ ခုထဲက ဂိုငျဇာပိရမဈကွီးကိုသာ မွငျတှနေို့ငျတော့ပွီး ကနျြ ၆ ခုကိုတော့ မူလပုံစံအတိုငျးမွငျတှနေို့ငျခွငျး မရှိတော့ပဲ ကှကျလပျနရောတှကေိုပဲ မွငျကွရမှာဖွဈပါတယျ။
အနုပညာရှငျ အမြိုးမြိုးကတော့ သူတို့စိတျကူးရှိသလို ဒီရှေးခတျေအံ့ဖှယျတှကေိုပုံဖျောရေးဆှဲခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီအထဲမှာ Budget Direct ဆိုတဲ့ သွစတွေးလအြာမခံကုမ်ပဏီကတော့ တမူထူးခွားပါတယျ။ ဒီကမ်ဘာ့အံ့ဖှယျ ၇ ခုကို စိတျဝငျစားသူတှေ သသေခြောခြာ ကွညျ့ရှုနိုငျဖို့ ဒီအရာတှဟော ဘယျနရောမှာ ဘယျလိုပုံစံနဲ့ တညျရှိခဲ့တယျ။ ယနအေ့ခြိနျမှာမွငျကှငျးနဲ့ဆိုရငျ ဘယျလိုဖွဈနိုငျတဲ့ အကွောငျးကို ပုံဖျောရေးဆှဲခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုပုံဖျောတဲ့နရောမှာ ပုံမှနျစိတျကူးနဲ့ မှနျးဆှဲတာမြိုးမဟုတျပဲ ကမ်ဘာ့အံ့ဖှယျတှရေဲ့ သမိုငျးမှတျတမျးတှနေဲ့အတူ သုတသေန သသေခြောခြာလုပျပွီး ဗိသုကာပညာရှငျ နဲ့ ဂရပျဖဈဒီဇိုငျးပညာရှငျတှကေ ပူးပေါငျးရေးဆှဲခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။
ယနမွေ့ငျကှငျးအတိုငျးမှာ ရှေးခတျေကမ်ဘာ့အံ့ဖှယျတှရေဲ့ မူလပုံစံကို မွငျရတာဟာ စိတျဝငျစားဖှယျကောငျးလှပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ရညျရှယျခကျြကတော့ စာတှထေဲမှာဖတျဖူးကွားဖူးနတေဲ့ ကမ်ဘာ့အံ့ဖှယျ ၇ ခုဆိုတာ ဒီလိုပါလား လို့ အငျတာနကျသုံးစှဲသူတှေ သိသာထငျရှားစှာ မွငျလာစဖေို့ ဖွဈပါတယျ လို့ Budget Direct က ဆိုပါတယျ။ ကဲ… ရှေးခတျေကမ်ဘာ့အံ့ဖှယျတှသော ယနခေ့တျေမှာ မူလအတိုငျးရှိနဦေးမယျဆိုရငျ ဘယျလိုမွငျရမလဲ ကွညျ့လိုကျကွရအောငျ….
၁။ Colossus of Rhodes
ကမ်ဘာ့ရှေးခတျေအံ့ဖှယျထဲတှငျ အပါဝငျဖွဈသော ကိုလော့ဆပျရှိ ရုတျဒျ ရုပျတုမှာ ရှေးခတျေဂရိတို့၏ နနေတျဘုရားဖွဈသော ဟီးလီးရပျ၏ ရုပျပုံကို ရညျစူးပွီး တညျဆောကျထားခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဘီစီ၂၈၀ မှာ ဂရိ နာမညျကြျော ပနျးပုဆရာ Chares of Lindos က ဂရိနိုငျငံ ရုတျဒျကြှနျး ပျေါတှငျ စဈပှဲအောငျနိုငျမှု အထိမျးအမှတျအနဖွေငျ့ မွို့တညျသညျ့အခါတှငျ မွို့ဝငျပေါကျဖွဈသောဆိပျကမျး ရတေံခါး ကမျးနဖူးပျေါတှငျ တညျဆောကျခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။
မီတာ (၃၀) ခနျ့မွငျ့မားသော ဟီးလီးရပျ နတျဘုရား ရုပျတုသညျ ရုဒျမွို့၏ အဝငျဆိပျကမျးနဖူးပျေါ တှငျ ကွှားကွှားဝံ့ဝံ့တညျရှိခဲ့ပွီး အဲဒီခတျေက ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး ရုပျတုအဖွဈမှတျတမျးဝငျခဲ့သျောလညျး တညျဆောကျပွီး ၅၄ နှဈအကွာ ဘီစီ ၂၂၄ ခုနှဈတှငျတှငျ မွငေလငျြဒဏျကွောငျ့ ကြိုးကကြာ ပကျြစီးခဲ့ရပါတယျ။
၂။ Great Pyramid of Giza
မဟာပိရမဈလို့ သိကွတဲ့ ဂိုငျဇာပိရမဈကွီးကတော့ အီဂဈြနိုငျငံ ကိုငျရိုမွို့အနီးမှာတညျရှိပွီး ဘီစီ ၂၅၆၀ ကာလက တညျဆောကျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ စတုတ်ထမွောကျ အီဂဈြမငျးဆကျ က ဖာရိုဘုရငျ ကူဖူး(ဂရိဘာသာဖွငျ့ ခြီရော့ပျ)ရဲ့ ဂူသင်ျခြိုငျးအဖွဈဆောကျလုပျခဲ့သညျ ဟု ယုံကွညျယူဆပွီး အနှဈ ၂၀ ကြျောကွာဆောကျလုပျခဲ့ကာ အကွီးဆုံး ပိရမဈကွီးလညျးဖွဈပါတယျ။
အောကျခွအေနားတဖကျစီကို ၇၅၆ပရှေညျလြားပွီး မူလအမွငျ့ကတော့ ၄၈၁ပေ တောငျရှိခဲ့ပါတယျ။ ယခုအခါမှာတော့ နှဈပေါငျးမြားစှာ သဘာဝရဲ့ တိုကျစားမှုကိုခံရတဲ့အတှကျ ၄၅၁ပေ ပဲ ရှိပါတော့တယျ။ ထုထညျအားဖွငျ့ ကုဗပေ ၉၁သနျးကြျောရှိပွီး ကြောကျတုံးပေါငျး ၂.၃သနျးကြျော ပါဝငျကာ တခြို့ကြောကျတုံးတှဆေိုရငျ တနျ ၅၀ခနျ့အထိ ရှိနပေါတယျ။ ရှေးခတျေကမ်ဘာ့ အံ့ဖှယျခုနဈပါးထဲမှ တခုတညျး ကွှငျးကနျြရဈသော အဆောကျအဦးကွီးလညျးဖွဈပါတယျ။
၃။ Hanging Gardens of Babylon
ဘဘေီလုံရှိ မိုးပြံဥယြာဉျကိုတော့ ရှေးခတျေ မွို့ပွနိုငျငံ တဈခု ဖွဈတဲ့ ဘဘေီလုံ မွို့( ယခုခတျေ အီရတျနိုငျငံ ဘာဘေး ဒသေ (Babil ) ရှိ အယျလျဟလော(Al Hillah)အနီး) မှာ တညျဆောကျခဲ့ပါတယျ။ ဒဏ်ဍာရီလာ ဘုရငျမ ဆယျမီးရာမဈဈ ကို အစှဲပွု၍ ဆယျမီးရာမဈဈ ၏ မိုးပြံဥယြာဉျလို့လညျးချေါကွပါတယျ။
ဒီဥယြာဉျကိုတော့ ဘဘေီလုံဘုရငျ နီဘူခတျြဒျနကျဇာ ၂ က ဇနီး မီဒီယာ ဒသေသူ အမီတဈ ကို နှဈသိမျ့ရနျ အတှကျ ဘီစီ ၆၀၀ ခနျ့တှငျ တညျဆောကျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ သူမသညျ သူမဒသေရှိ သဈပငျမြားနှငျ့ ရနံ့မှေးသော ပနျးပငျမြားကို လှမျးဆှတျနသေညျ့ အတှကျကွောငျ့ မြားပွားလှသောသဈပငျပနျးမနျတှနေဲ့ အတူတညျဆောကျပေးခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဒီမိုးပြံဥယြာဉျဟာ ဘီစီ ၂ရာစု နောကျပိုငျး မွငေလငျြ အခြို့ကွောငျ့ ပကျြစီးခဲ့ရပါတယျ။
၄။ Lighthouse of Alexandria
ဒီမီးပွတိုကျကွီးကိုတော့ ဘီစီ ၂၈၄-၂၄၆ ကွားကာလမှာ အီဂဈြဘုရငျ ဒုတိယတျောလမီဘုရငျက တညျဆောကျခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။ နရောကတော့ နိုငျးမွဈဝ ဆိပျကမျးမွို့ဖွဈတဲ့ အလကျဇနျးဒီးယားမွို့ရဲ့ ကြောကျဆောငျပျေါမှာဖွဈပါတယျ။ အလကျဇနျးဒီးယားမွို့ကို ညပိုငျးတှငျ ဆိုကျကပျလာမညျ့ လှသေဘောင်္ မြားကို လမျးပွရနျတညျဆောကျခဲ့ခွငျးဖွဈကာ အမွငျ့ပေ ၅၀၀ ခနျ့ရှိပါတယျ။
ပုံသဏ်ဍာနျကတော့ အောကျခွကေ စတုရနျးပုံ၊ အလယျက အဋ်ဌမဂံပုံ ရှိပွီး အပျေါဆုံးပိုငျးကတော့ အဝိုငျးပုံဖွဈပါတယျ။ ကြောကျတုံးမြားဖွငျ့ဆငျ့ကာ အခိုငျအမာတညျဆောကျထားခွငျးဖွဈကာ အခငျြး ၂ မီတာခနျ့ရှိသော ကွေးမုံ မှနျ၎ ခပျြကို အရပျလေးမကျြနှာ ဘကျအလငျးပွနျနိုငျအောငျတပျဆငျထားပွီး အလယျမှာတော့ ဝလေငါးဆီကို မီးရှို့ပွီး အလငျးရအောငျ ပွုလုပျမညျ့ မီးတိုငျရှိနပေါတယျ။ အဒေီ၉၅၆ နှငျ့ ၁၃၂၃ ခုနှဈကွားကာလမှာ ငလြှငျဒဏျ ၃ကွိမျခံခဲ့ရပွီး ပွိုကပြကျြစီးခဲ့ရပါတယျ။ အီဂဈြတှဟော မီးပွတိုကျကွီးရဲ့ အစိတျအပိုငျးတှကေို အဒေီ ၁၄၈၀ ခုနှဈတိုငျ ထိနျးသိမျးခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာတော့ Qaitbay ခံတပျဆောကျလုပျရာမှာ မီးပွတိုကျကြောကျတုံးတှကေို အသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။
၅။ Mausoleum at Halicarnassus
ဘီစီ ၃၅၁ ခုနှဈမှာ တညျဆောကျပွီးစီးခဲ့တဲ့ မျောဆိုလော့ဈ ဂူဗိမာနျဟာ ယခုတူရကီနိုငျငံ Halicarnassus မွို့မှာတညျရှိခဲ့ပါတယျ။ ယနအေ့ခါမှာတော့ ယိုယှငျးပကျြစီးနတေဲ့ အုတျပုံ အပိုငျးအစတှသောရှိတော့ပမေယျ့ ဟိုတခြိနျကတော့ တပျချြမဟာလိုပဲ ခနျ့ငွားလှပတဲ့ အဆောကျအအုံဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ပါရှနျးအငျပါယာရဲ့ ဘုရငျ Artaxerxes III က သူ့ရဲ့ဘုနျတနျးခိုးကွီးထှားမှုကို ထငျဟပျစတေဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ တညျဆောကျခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။
ပါရှနျး နဲ့ ဂရိယဉျကြေးမှု ဗိသုကာပညာရပျတှကေို ပေါငျးစပျတညျဆောကျခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။ အနုစိတျဗိသုကာ လကျရာတှနေဲ့ လှပခမျးနားတဲ့ ဗိမာနျကွီးဟာ အဲဒီခတျေက ပါရှနျးအငျပါယာရဲ့ ဘုနျးတနျခိုးကွီးမားမှု နဲ့ ယဉျကြေးမှု အဆငျ့အတနျးကို ထငျဟပျစခေဲ့ပါတယျ။ အဒေီ ၁၂ရာစု နဲ့ ၁၅ရာစုကွား အကွိမျကွိမျလှုပျခတျခဲ့တဲ့ ငလြှငျတှကွေောငျ့ အဆောကျအအုံကွီးဟာ အဒေီ ၁၄၉၄ အခြိနျမှာတော့ ပွိုကပြကျြစီးခဲ့ရပါတော့တယျ။
၆။ Statue of Zeus
ဘီစီ ၄၃၅ ခုနှဈ က ဂရိ ပနျးပုပညာရှငျ ဖီးဒီးယကျ ထုလုပျခဲ့တဲ့ ဇုဈနတျမငျးကွီးရုပျတုကတော့ ဂရိနိုငျငံ အိုလံပီယာ တောငျထိပျရှိ ဇုဈနတျကှနျးမှာ တညျရှိခဲ့တာပါ။ ဇုဈနတျဘုရားရဲ့ ရုပျတုဟာ ၁၂ မီတာကြျော (၄၁ပေ)အမွငျ့ရှိပွီး ရှခေထြားပွီး၊ ကြောကျမကျြရတနာမြား စီခယျြထားသော သဈကတိုး ပလ်လငျထကျတှငျ ထိုငျနသေညျ့ပုံကို ထုဆဈထားခွငျးဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
လကျထဲတှငျ မိုးကွိုးလကျနကျကို စှဲကိုငျထားပွီးရှကေို့ တူရှူ စိုကျကွညျ့နတေဲ့ မကျြလုံးမှာ အသကျပါလှတယျလို့ ဆိုကွပါတယျ။ အဲဒီခတျေအခါက ဂရိတိုရဲ့တရားစီရငျရေး နဲ့ ကမျြးကြိနျခွငျး ကိစ်စအ၀၀ကို နတျရုပျတုကွီးရှမှေ့ာ ပွုလုပျခဲ့ကွတာပါ။ ဒီရုပျတုကွီးဟာ အဒေီ ၅ ရာစုခနျ့မှာတော့ ကွီးမားတဲ့ မီးလောငျမှုကွီးတခုကွောငျ့ ပကျြစီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယျလို့ သိရပါတယျ။( ဘိုငျဇနျတိုငျးသမိုငျးပညာရှငျ Georgios Kedrenos ရဲ့ မှတျတမျးကတော့ ဒီရုပျတုကွီးဟာ ကှနျစတနျတီနိုပယျ(ယခုအစ်စတနျဘူလျ) မွို့ကို သယျဆောငျခွငျးခံရပွီး အဒေီ ၄၇၅ မှာ Lausus နနျးတျောမီးလောငျခံရတဲ့အထဲ ပါသှားခဲ့တယျ လို့ ဆိုထားပါတယျ)
၇။ Temple of Artemis at Ephesus
Temple of Diana လို့လညျးချေါတဲ့ အာတီးမဈ ဘုရားကြောငျးကို အီးဖီးဆပျ အရပျ (ယခု တူရကီနိုငျငံ ဆယျလျကပျ) မှာ ဂရိတို့က တညျဆောကျခဲ့ကွပါတယျ။ ဘီစီ ၇ ရာစုခနျ့ကတညျးက တညျဆောကျခဲ့တဲ့ အာတီးမီး ဘုရားကြောငျးဟာ အကွိမျကွိမျ ဖကျြဆီးခွငျးကို ခံခဲ့ရပမေယျ့ အဒေီ ၄၀၁ခုနှဈ တိုငျအောငျ အကွိမျကွိမျ ပွနျလညျ ပွုပွငျတညျဆောကျခဲ့ကွပါတယျ။
ပထမဦးဆုံးတညျဆောကျစဉျအခါက ဂရိရှိ ဗိသုကာပညာရှငျမြား ပူးပေါငျးပွီး ဒီဇိုငျးထုတျကာ ဖွူလှသော မာဘယျကြောကျသားမြား ကိုသာ သုံးပွီး လှပခမျးနားစှာ တညျဆောကျခဲ့ကွခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဒါအပွငျ အဲဒီခတျေက အတျောဆုံးကြောကျဆဈသမားတို့က လကျရာမွောကျသော ကြောကျခကျနှယျမြား၊ ရုပျပုံမြား၊ရုပျတုမြားကို ဒီဘုရားကြောငျးကွီးမှာ တနျဆာဆငျထုလုပျခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီဘုရားကြောငျးကွီးဟာ ပထမအကွိမျရကွေီးမှုကွောငျ့ ပကျြစီးခဲ့သလို ၊ မကျစီဒိုးနီးယနျး၊ ဆီးရီးယနျး၊ ပါရှနျး၊ ရိုမနျ တို့ရဲ့ အကွိမျကွိမျ ဖကျြဆီးခွငျးကို ခံခဲ့ရကာ အဒေီ ၄၀၁မှာတော့ အပွီးတိုငျပကျြစီးသှားရပါတော့တယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ အောကျခံဖောငျဒေးရှငျး ကြောကျတုံးတှကေိုပဲ မွငျရပါတော့တယျ။
———– —— ——-
ရှေးခေတ်ကမ္ဘာ့အံဖွယ် ၇ ခုရဲ့ မူလပုံစံ
ရှေးခေတ် ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ၇ ခုအကြောင်းကိုတော့ အနည်းနဲ့ အများ အားလုံးသိဖူးကြားဖူးပြီးဖြစ်ကြမှာပါ။ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ လူသားများသမိုင်းအတွင်းမှ လူတို့တည်ဆောက်ခဲ့ကြသော အရာများ နှင့် သဘာဝအတိုင်းအံ့မခန်းတည်ရှိနေသာ အရာများကို စုစည်းပြီး ကမ္ဘာ့အံဖွယ်များအဖြစ် စာရင်းပြုစုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးခေတ်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်တွေကို ဂရိခရီးသွား သမိုင်းပညာရှင်တွေဟာ ဘီစီ ၁ရာစု ကာလကတည်းက ပြုစုခဲ့ကြပေမယ့် ဒီ ၇ ခုကို အများစုလက်ခံလာကြတာကတော့ ဉာဏ်သစ်အရေးတော်ပုံခေတ် အေဒီ ၁၅ရာစု ကာလလောက်မှ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအံ့ဖွယ် ၇ ခုကတော့ (၁) ဂိုင်ဇာမဟာပိရမစ်ကြီး ၊ (၂) ဘေဘီလုံရှိ မိုးပျံဥယျာဉ်၊(၃) အိုလမ်ပီယာရှိ ဇုစ်နတ်မင်းကြီး၏ ရုပ်တု ၊ (၄) အာတီးမစ် ဘုရားကျောင်း၊ (၅) ဟေလီကာနပ်ဆပ်ရှိ မော်ဆိုလော့စ်၏ ဂူသင်္ချိုင်း၊ (၆) ကိုလော့ဆပ်ရှိ ရုတ်ဒ်ရုပ်တု နဲ့ (၇) အလက်ဇန္ဒြီးယားမီးပြတိုက် တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဆောက်အအုံ နဲ့ ရုပ်တုတွေထဲမှာ အစောဆုံးကတော့ ဘီစီ ၂၆ရာစုကာလမှာ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဂိုင်ဇာပိရမစ်ကြီးဖြစ်ပြီး နောက်အကျဆုံးကတော့ ဘီစီ ၂၈၀ ခန့်မှာ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အလက်ဇန္ဒြီးယားမီးပြတိုက် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ နဲ့ ၅၀၀၀ ကြားမှာ တည်ဆောက်ခဲ့တာလို့ ဆိုရပါမယ်။ ယနေ့အချိန်မှာတော့ ဒီရှေးခေတ် ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ၇ ခုထဲက ဂိုင်ဇာပိရမစ်ကြီးကိုသာ မြင်တွေ့နိုင်တော့ပြီး ကျန် ၆ ခုကိုတော့ မူလပုံစံအတိုင်းမြင်တွေ့နိုင်ခြင်း မရှိတော့ပဲ ကွက်လပ်နေရာတွေကိုပဲ မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာရှင် အမျိုးမျိုးကတော့ သူတို့စိတ်ကူးရှိသလို ဒီရှေးခေတ်အံ့ဖွယ်တွေကိုပုံဖော်ရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ Budget Direct ဆိုတဲ့ သြစတြေးလျအာမခံကုမ္ပဏီကတော့ တမူထူးခြားပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ၇ ခုကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ သေသေချာချာ ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ ဒီအရာတွေဟာ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ တည်ရှိခဲ့တယ်။ ယနေ့အချိန်မှာမြင်ကွင်းနဲ့ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းကို ပုံဖော်ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာ ပုံမှန်စိတ်ကူးနဲ့ မှန်းဆွဲတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်တွေရဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေနဲ့အတူ သုတေသန သေသေချာချာလုပ်ပြီး ဗိသုကာပညာရှင် နဲ့ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေက ပူးပေါင်းရေးဆွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့မြင်ကွင်းအတိုင်းမှာ ရှေးခေတ်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်တွေရဲ့ မူလပုံစံကို မြင်ရတာဟာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စာတွေထဲမှာဖတ်ဖူးကြားဖူးနေတဲ့ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ၇ ခုဆိုတာ ဒီလိုပါလား လို့ အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေ သိသာထင်ရှားစွာ မြင်လာစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ် လို့ Budget Direct က ဆိုပါတယ်။ ကဲ… ရှေးခေတ်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်တွေသာ ယနေ့ခေတ်မှာ မူလအတိုင်းရှိနေဦးမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမြင်ရမလဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်….
ကမ္ဘာ့ရှေးခေတ်အံ့ဖွယ်ထဲတွင် အပါဝင်ဖြစ်သော ကိုလော့ဆပ်ရှိ ရုတ်ဒ် ရုပ်တုမှာ ရှေးခေတ်ဂရိတို့၏ နေနတ်ဘုရားဖြစ်သော ဟီးလီးရပ်၏ ရုပ်ပုံကို ရည်စူးပြီး တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘီစီ၂၈၀ မှာ ဂရိ နာမည်ကျော် ပန်းပုဆရာ Chares of Lindos က ဂရိနိုင်ငံ ရုတ်ဒ်ကျွန်း ပေါ်တွင် စစ်ပွဲအောင်နိုင်မှု အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် မြို့တည်သည့်အခါတွင် မြို့ဝင်ပေါက်ဖြစ်သောဆိပ်ကမ်း ရေတံခါး ကမ်းနဖူးပေါ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မီတာ (၃၀) ခန့်မြင့်မားသော ဟီးလီးရပ် နတ်ဘုရား ရုပ်တုသည် ရုဒ်မြို့၏ အဝင်ဆိပ်ကမ်းနဖူးပေါ် တွင် ကြွားကြွားဝံ့ဝံ့တည်ရှိခဲ့ပြီး အဲဒီခေတ်က ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရုပ်တုအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သော်လည်း တည်ဆောက်ပြီး ၅၄ နှစ်အကြာ ဘီစီ ၂၂၄ ခုနှစ်တွင်တွင် မြေငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ကျိုးကျကာ ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။
မဟာပိရမစ်လို့ သိကြတဲ့ ဂိုင်ဇာပိရမစ်ကြီးကတော့ အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုမြို့အနီးမှာတည်ရှိပြီး ဘီစီ ၂၅၆၀ ကာလက တည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စတုတ္ထမြောက် အီဂျစ်မင်းဆက် က ဖာရိုဘုရင် ကူဖူး(ဂရိဘာသာဖြင့် ချီရော့ပ်)ရဲ့ ဂူသင်္ချိုင်းအဖြစ်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည် ဟု ယုံကြည်ယူဆပြီး အနှစ် ၂၀ ကျော်ကြာဆောက်လုပ်ခဲ့ကာ အကြီးဆုံး ပိရမစ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ခြေအနားတဖက်စီကို ၇၅၆ပေရှည်လျားပြီး မူလအမြင့်ကတော့ ၄၈၁ပေ တောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါမှာတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ သဘာဝရဲ့ တိုက်စားမှုကိုခံရတဲ့အတွက် ၄၅၁ပေ ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ထုထည်အားဖြင့် ကုဗပေ ၉၁သန်းကျော်ရှိပြီး ကျောက်တုံးပေါင်း ၂.၃သန်းကျော် ပါဝင်ကာ တချို့ကျောက်တုံးတွေဆိုရင် တန် ၅၀ခန့်အထိ ရှိနေပါတယ်။ ရှေးခေတ်ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးထဲမှ တခုတည်း ကြွင်းကျန်ရစ်သော အဆောက်အဦးကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘေဘီလုံရှိ မိုးပျံဥယျာဉ်ကိုတော့ ရှေးခေတ် မြို့ပြနိုင်ငံ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဘေဘီလုံ မြို့( ယခုခေတ် အီရတ်နိုင်ငံ ဘာဘေး ဒေသ (Babil ) ရှိ အယ်လ်ဟေလာ(Al Hillah)အနီး) မှာ တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒဏ္ဍာရီလာ ဘုရင်မ ဆယ်မီးရာမစ်စ် ကို အစွဲပြု၍ ဆယ်မီးရာမစ်စ် ၏ မိုးပျံဥယျာဉ်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။
ဒီဥယျာဉ်ကိုတော့ ဘေဘီလုံဘုရင် နီဘူချတ်ဒ်နက်ဇာ ၂ က ဇနီး မီဒီယာ ဒေသသူ အမီတစ် ကို နှစ်သိမ့်ရန် အတွက် ဘီစီ ၆၀၀ ခန့်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမသည် သူမဒေသရှိ သစ်ပင်များနှင့် ရနံ့မွေးသော ပန်းပင်များကို လွမ်းဆွတ်နေသည့် အတွက်ကြောင့် များပြားလှသောသစ်ပင်ပန်းမန်တွေနဲ့ အတူတည်ဆောက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုးပျံဥယျာဉ်ဟာ ဘီစီ ၂ရာစု နောက်ပိုင်း မြေငလျင် အချို့ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။
ဒီမီးပြတိုက်ကြီးကိုတော့ ဘီစီ ၂၈၄-၂၄၆ ကြားကာလမှာ အီဂျစ်ဘုရင် ဒုတိယတော်လမီဘုရင်က တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နေရာကတော့ နိုင်းမြစ်ဝ ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့ အလက်ဇန်းဒီးယားမြို့ရဲ့ ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အလက်ဇန်းဒီးယားမြို့ကို ညပိုင်းတွင် ဆိုက်ကပ်လာမည့် လှေသဘောင်္ များကို လမ်းပြရန်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ အမြင့်ပေ ၅၀၀ ခန့်ရှိပါတယ်။
ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့ အောက်ခြေက စတုရန်းပုံ၊ အလယ်က အဋ္ဌမဂံပုံ ရှိပြီး အပေါ်ဆုံးပိုင်းကတော့ အဝိုင်းပုံဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်တုံးများဖြင့်ဆင့်ကာ အခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ကာ အချင်း ၂ မီတာခန့်ရှိသော ကြေးမုံ မှန်၎ ချပ်ကို အရပ်လေးမျက်နှာ ဘက်အလင်းပြန်နိုင်အောင်တပ်ဆင်ထားပြီး အလယ်မှာတော့ ဝေလငါးဆီကို မီးရှို့ပြီး အလင်းရအောင် ပြုလုပ်မည့် မီးတိုင်ရှိနေပါတယ်။ အေဒီ၉၅၆ နှင့် ၁၃၂၃ ခုနှစ်ကြားကာလမှာ ငလျှင်ဒဏ် ၃ကြိမ်ခံခဲ့ရပြီး ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ အီဂျစ်တွေဟာ မီးပြတိုက်ကြီးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို အေဒီ ၁၄၈၀ ခုနှစ်တိုင် ထိန်းသိမ်းခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ Qaitbay ခံတပ်ဆောက်လုပ်ရာမှာ မီးပြတိုက်ကျောက်တုံးတွေကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဘီစီ ၃၅၁ ခုနှစ်မှာ တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့တဲ့ မော်ဆိုလော့စ် ဂူဗိမာန်ဟာ ယခုတူရကီနိုင်ငံ Halicarnassus မြို့မှာတည်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့အခါမှာတော့ ယိုယွင်းပျက်စီးနေတဲ့ အုတ်ပုံ အပိုင်းအစတွေသာရှိတော့ပေမယ့် ဟိုတချိန်ကတော့ တပ်ခ်ျမဟာလိုပဲ ခန့်ငြားလှပတဲ့ အဆောက်အအုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပါရှန်းအင်ပါယာရဲ့ ဘုရင် Artaxerxes III က သူ့ရဲ့ဘုန်တန်းခိုးကြီးထွားမှုကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပါရှန်း နဲ့ ဂရိယဉ်ကျေးမှု ဗိသုကာပညာရပ်တွေကို ပေါင်းစပ်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အနုစိတ်ဗိသုကာ လက်ရာတွေနဲ့ လှပခမ်းနားတဲ့ ဗိမာန်ကြီးဟာ အဲဒီခေတ်က ပါရှန်းအင်ပါယာရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားမှု နဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်အတန်းကို ထင်ဟပ်စေခဲ့ပါတယ်။ အေဒီ ၁၂ရာစု နဲ့ ၁၅ရာစုကြား အကြိမ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ငလျှင်တွေကြောင့် အဆောက်အအုံကြီးဟာ အေဒီ ၁၄၉၄ အချိန်မှာတော့ ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပါတော့တယ်။
ဘီစီ ၄၃၅ ခုနှစ် က ဂရိ ပန်းပုပညာရှင် ဖီးဒီးယက် ထုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဇုစ်နတ်မင်းကြီးရုပ်တုကတော့ ဂရိနိုင်ငံ အိုလံပီယာ တောင်ထိပ်ရှိ ဇုစ်နတ်ကွန်းမှာ တည်ရှိခဲ့တာပါ။ ဇုစ်နတ်ဘုရားရဲ့ ရုပ်တုဟာ ၁၂ မီတာကျော် (၄၁ပေ)အမြင့်ရှိပြီး ရွှေချထားပြီး၊ ကျောက်မျက်ရတနာများ စီချယ်ထားသော သစ်ကတိုး ပလ္လင်ထက်တွင် ထိုင်နေသည့်ပုံကို ထုဆစ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ထဲတွင် မိုးကြိုးလက်နက်ကို စွဲကိုင်ထားပြီးရှေ့ကို တူရှူ စိုက်ကြည့်နေတဲ့ မျက်လုံးမှာ အသက်ပါလှတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီခေတ်အခါက ဂရိတိုရဲ့တရားစီရင်ရေး နဲ့ ကျမ်းကျိန်ခြင်း ကိစ္စအ၀၀ကို နတ်ရုပ်တုကြီးရှေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီရုပ်တုကြီးဟာ အေဒီ ၅ ရာစုခန့်မှာတော့ ကြီးမားတဲ့ မီးလောင်မှုကြီးတခုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။( ဘိုင်ဇန်တိုင်းသမိုင်းပညာရှင် Georgios Kedrenos ရဲ့ မှတ်တမ်းကတော့ ဒီရုပ်တုကြီးဟာ ကွန်စတန်တီနိုပယ်(ယခုအစ္စတန်ဘူလ်) မြို့ကို သယ်ဆောင်ခြင်းခံရပြီး အေဒီ ၄၇၅ မှာ Lausus နန်းတော်မီးလောင်ခံရတဲ့အထဲ ပါသွားခဲ့တယ် လို့ ဆိုထားပါတယ်)
Temple of Diana လို့လည်းခေါ်တဲ့ အာတီးမစ် ဘုရားကျောင်းကို အီးဖီးဆပ် အရပ် (ယခု တူရကီနိုင်ငံ ဆယ်လ်ကပ်) မှာ ဂရိတို့က တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘီစီ ၇ ရာစုခန့်ကတည်းက တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အာတီးမီး ဘုရားကျောင်းဟာ အကြိမ်ကြိမ် ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပေမယ့် အေဒီ ၄၀၁ခုနှစ် တိုင်အောင် အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လည် ပြုပြင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးတည်ဆောက်စဉ်အခါက ဂရိရှိ ဗိသုကာပညာရှင်များ ပူးပေါင်းပြီး ဒီဇိုင်းထုတ်ကာ ဖြူလွှသော မာဘယ်ကျောက်သားများ ကိုသာ သုံးပြီး လှပခမ်းနားစွာ တည်ဆောက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် အဲဒီခေတ်က အတော်ဆုံးကျောက်ဆစ်သမားတို့က လက်ရာမြောက်သော ကျောက်ခက်နွယ်များ၊ ရုပ်ပုံများ၊ရုပ်တုများကို ဒီဘုရားကျောင်းကြီးမှာ တန်ဆာဆင်ထုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဘုရားကျောင်းကြီးဟာ ပထမအကြိမ်ရေကြီးမှုကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သလို ၊ မက်စီဒိုးနီးယန်း၊ ဆီးရီးယန်း၊ ပါရှန်း၊ ရိုမန် တို့ရဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရကာ အေဒီ ၄၀၁မှာတော့ အပြီးတိုင်ပျက်စီးသွားရပါတော့တယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ အောက်ခံဖောင်ဒေးရှင်း ကျောက်တုံးတွေကိုပဲ မြင်ရပါတော့တယ်။
Tags: Art world history world knowledge
Previous: တောငျကိုရီးယားမွို့တျော ဆိုးလျ အကွောငျး သိကောငျးစရာ
Next: ကြှနျတျောတို့ ထငျထားတဲ့အခြိနျထကျ စောတဲ့ တီထှငျမှုမြား